पर्यटन विकास गर्न संयुक्त पहलको खाँचो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
पर्यटन विकास गर्न संयुक्त पहलको खाँचो
Published On : ३ भाद्र २०७६, मंगलवार १०:१२
आउँदो भदौको २५ गते लिगलिगकोटबाट गोरखा दरबारसम्म म्याराथुन दौड हुने भएको छ । गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र नेपाली सेना(रणसिँह दल गण)ले दौडको आयोजना गरेको हो । करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको सो दौडबाट जिल्लाकै पर्यटन विकास हुने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल भ्रमणबर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा म्याराथुन दौड आयोजना गर्न लागिएको हो । करिब २० करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको सो अवसरमा गोरखामा पनि कम्तिमा २५ प्रतिशत पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
साथै यी स्थानीय तह तथा नेपाली सेनाले द्रव्य शाह र पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालन गरेको राज्य एकीकरण अभियानमा प्रयोग भएको बाटोमा पर्यटक हिडाएर एकीकरण पदमार्गको विकास गर्ने जनाएका छन् । यतिले मात्र पुग्दैन । यस्ता सिर्जनशील, रचनात्मक कार्यक्रम अरु पनि गर्नुपर्छ । पर्यटन बर्षमा भित्र्याएका पर्यटकले राम्रो सन्देश लगे भने अरु पर्यटक थपिने निश्चित छ । त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन । पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार पनि बनाउनु पर्छ । यतिले पनि पुग्दैन । प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । वृत्तचित्र बनाउने, युटुव, फेसबुक, वेभसाइटमार्फत सूचना, विज्ञापन गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ ।
एउटा स्थानीय तहले चाहेर मात्र पर्यटन विकास हुदैन । पर्यटन विकास गर्न बिभिन्न स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । पालुंटार, गोरखा नपा, सिरानचोक गापाले झै अन्य सीमा जोडिएका स्थानीय सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्छ ।
गोरखाको बस सेवा कसरी चलेका छन्, हेर्ने कि ?
जतिबेला नेपालमा कोरोनाले पाइला राखेको थिएन, हल्लाले मात्र छाएको थियो, मान्छेहरु असाध्यै डराउँथे । कोठाको
सोलार बाल्ने धार्चे र चुमनुब्रीको सपना साकार बनोस्
देश बनाउने पनि निर्माण व्यवसायी, देश बन्न नदिने पनि निर्माण व्यवसायी । यसमा दोराय छैन
भूकम्प पीडितलाई ठग्न केही कर्मचारी नै संलग्न
दराैँदी समाचारदाताः जसलाई समस्या परेको छ, उसैलाई पेल्न, उसैलाई ठग्न, उसैलाई लुट्न उद्दत हुने घटना
भुकम्प पीडितलाई ठग्नेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ
सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ पाए घर बनाउने योजनामा भुकम्प पीडितहरु पटक-पटक पुन निर्माण प्राधिकरणमा